सामग्री लेखनमा Semalt विस्तृत गाइड
सामग्री लेखनको लागि Semalt विस्तृत गाइड
सामग्री को तालिका
सामग्री लेखन के हो
सामग्री लेख्ने तरिका
ए। प्रत्येक विशेष सामग्रीको उद्देश्य बुझ्नुहोस्
बी। लेख्नु भन्दा पहिले अनुसन्धान र विस्तृत पढ्नुहोस्
Brand ब्रान्डको आवाज प्रतिनिधित्व गर्नुहोस्
Aw कसरी अद्भुत हुने तपाईंको वेबसाइट र सोशल मीडिया सामग्रीको साथ परिणामहरू
कसरी गर्ने र लेख लेखहरू सिर्जना गर्नुहोस्
इन्फोग्राफिक्स प्रयोग गर्नुहोस्
D। प्रूफ्रेड र लेखन पछि सम्पादन गर्नुहोस्
E। उपयुक्त कीवर्डहरू प्रयोग गर्नुहोस्
<> << डिव << डिव> १। परिचय
सामग्री राजा हो, तर त्यो सामग्रीको गुणवत्तामा निर्भर गर्दछ। उच्च-गुणवत्ता सामग्री यस्तो प्रकारको हो जुन तपाईंको व्यवसायलाई बढाउन र परिवर्तन गर्न मद्दत गर्दछ। जहाँसम्म तपाईंसँग राम्ररी डिजाइन गरिएको वेबसाइट छ जहाँ तपाईं ग्राहक र ग्राहकहरूसँग जडान गर्न सक्नुहुन्छ, गुणस्तरीय सामग्री बिना, गुगलले तपाईंलाई मनपर्दैन।
यसका साथसाथै, तपाईंलाई पनि तपाइँको ग्राहकहरूको लागि शक्तिशाली प्रोजेक्ट प्रस्तावहरू पुर्‍याउन उत्कृष्ट सामग्री चाहिन्छ। स्पष्ट अझै पेचीदा सर्तहरूमा प्रस्तावहरू पुर्‍याउन असफल भएमा यसले तपाईंलाई सम्भावित ग्राहक/साझेदारहरू हराउन सक्छ।
गुणस्तरीय सामग्री कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने बारे जानकारले तपाईंलाई तपाईंको ग्राहक आधार निर्माण गर्न, ब्रान्ड सचेतना बढाउन, र उच्च आय उत्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ। यो लेखले सामग्री लेखनको बारेमा विस्तृत गाईड प्रदान गर्दछ र Semalt ले कसरी तपाईंको व्यवसायमा सामग्री लेखन सेवाहरू प्रदान गरेर मद्दत गर्दछ।
२। सामग्री लेख्नु भनेको के हो?
सामग्री लेखनको अर्थ बिभिन्न मानिसहरुलाई धेरै चीज हुन्छ। तपाइँलाई जे पनि सामग्री लेखनको अर्थ छ, समग्र परिभाषा यो छ कि यो विज्ञापनको एक प्रकार हो।
यो विज्ञापनको प्रकार हो जुन अरू ब्रान्ड र व्यवसायहरूबाट एक ब्रान्ड फरक गर्दछ। यो विज्ञापन हो कि तपाइँको कम्पनी दुबै चेतना र बेहोशी गर्छ। संक्षेप मा, सामग्री लेखन भनेको तपाईं को हो (तपाईंको व्यवसाय/ब्रान्ड)। यो ब्लग पोष्ट र लेख बाट सामाजिक मिडिया पोष्टहरु सम्म, कर्पोरेट ईमेल सम्म, भिडियो/अडियो स्क्रिप्ट र मनपर्दो सम्म।
सामग्री तपाईंको व्यवसाय वा संगठनको लागि विशिष्ट ब्रान्डि ofको आधार हो, त्यसैले तपाईंले यसलाई आफ्नो व्यवसायको व्यक्तित्वका साथ साथै ग्राहकहरूको आवश्यकता अनुरूप दर्ता गर्न आवश्यक छ र सम्भावित ग्राहकहरु लेख्ने प्रक्रिया आफैमा, योजना, प्रुफरीडिंग, र सम्पादन पनि सामग्री लेखनको अंश हो। तपाईंले सामग्री लेख्न लैजानु हुने दृष्टिकोणले सामग्री प्रकाशित गर्दा तपाईले पाउनु पर्ने परिणाम निर्धारण गर्दछ।
।। सामग्री लेख्ने तरिका कसरी
सामग्री लेखन सेवाहरू छन् तपाइँलाई शीर्ष सामग्री प्राप्त गर्न मद्दतको लागि जुन तपाइँको व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धीहरू बीच एक धार दिन्छ। त्यहाँ शीर्ष रणनीतिहरू सामग्री लेख्ने सेवाहरूले topnotch सामग्री सिर्जना गर्न प्रयोग गर्दछ। तल सामग्री लेख्नको महत्त्वपूर्ण हवसहरू छन्।
< div> चाहे तपाइँ आफैं सामग्री लेखिरहनु भएको छ वा सामग्री लेख्ने सेवा प्रदायकमा तपाइँको सामग्री लेखन प्रणालीलाई आउटसोर्स गर्दै हुनुहुन्छ, सामग्रीको प्रकार बुझेर तपाईलाई आवश्यक छ।
त्यहाँ बिभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू छन्, जस्तै ब्लग पोष्टहरू र लेखहरू, ईमेल न्यूजलेटरहरू, व्यवसाय प्रस्तावहरू, सामाजिक मिडिया पोष्टहरू, धेरै अन्यहरू बीच। यी सबैसँग फरक लेखन ढाँचाहरू छन्, र तपाईंले उच्च-गुणवत्ता सामग्री वितरण गर्न प्रत्येकका लागि स्वरूपण सिद्धान्तहरू बुझ्नु आवश्यक छ। उदाहरण को लागी, तपाइँ एक आधिकारिक ईमेल वा व्यापार प्रस्ताव लेख्न को लागी एक सामाजिक मीडिया पोस्ट ढाँचा को उपयोग गर्न सक्नुहुन्न; यसले मात्र यसलाई काट्ने छैन।
जब तपाईं प्रत्येक सामग्रीको उद्देश्य बुझ्नुहुन्छ, तपाईं यसलाई दर्साउन सक्षम हुनुहुनेछ ब्रान्डको शैलीसँग मेल खान्छ र लक्षित दर्शकहरूलाई सुहाउँदछ। यस्तो सामग्री तपाइँको ग्राहकहरु, ग्राहकहरु, वा व्यापार सहयोगीहरु संग एक पेशेवर सम्बन्ध बढाउन र कायम राख्न मद्दत गर्दछ। त्यसोभए topnotch सामग्री लेख्नको लागि, तपाइँको ब्रान्ड र लक्षित श्रोतालाई बुझेर शुरू गर्नुहोस्। तिनीहरूको प्राथमिकताहरू विश्लेषण गर्नुहोस् र यार्डस्टिकको रूपमा सामग्री सिर्जना गर्न तिनीहरू सम्बन्धित गर्न सक्छन् र तिनीहरूसँग संलग्न हुन सक्छन्।
बी लेख्नु अघि अनुसन्धान र फराकिलो पढ्नुहोस्
एक पटक तपाईंले आफ्नो लक्षित दर्शकहरू र तपाईंको ब्रान्ड व्यक्तित्व बुझ्नुभयो भने, तपाईंले अनुसन्धान गर्नु पर्छ र लेख्नु अघि विस्तृत पढ्नु पर्छ। आज, इन्टरनेट र पनि कर्पोरेट संसार गलत वा आधा बेक्ड जानकारीले भरिएको छ। यदि एक ब्रान्डले सामग्रीमा गलत वा आधा बेक्ड जानकारी छोड्दै जान्छ, यसले यसको विश्वसनीयता साथै ग्राहकहरू, ग्राहकहरू र प्रतिस्पर्धाहरू बीच प्रासंगिकता पनि गुमाउनेछ।
कल्पना गर्नुहोस् अनलाइन समाचार आउटलेटमा गलत जानकारी प्राप्त गर्नका लागि मात्र; तपाईलाई उनीहरूको खबरहरू फेरि पढ्ने कष्ट कहिल्यै हुँदैन। व्याकरणिक त्रुटिहरू र भ्रमपूर्ण जानकारीले भरिएको कर्पोरेट ईमेलको बारेमा के हुन्छ? यस्तो एकल ईमेलले संगठन र ग्राहकहरु बीच यसको सान्दर्भिकता गुमाउन सक्छ। जब तपाइँको सामग्री महत्वपूर्ण र सही जानकारीमूलक हुन्छ, यसले तपाइँको ब्रान्डलाई एक विश्वसनीय र विश्वसनीयको रूपमा प्रोजेक्ट गर्दछ।
पूर्व लेखन चरण पछि, अर्को लेखन नै आउँछ। Semalt विश्वास गर्दछ कि सामग्रीको प्रकार जुन तपाइँको ब्रान्ड, व्यवसाय, वा संगठनसँग सम्बन्धित छ तपाइँको प्रतिष्ठा र ग्राहकहरु र ग्राहकहरु बीच प्रासंगिकता निर्धारित गर्दछ। यसैकारण माइक्रोसफ्ट, फोर्ब्स, गुगल, र अधिक मनपराउनेहरू आज संसारमा हावी गर्न जारी छ।
उनीहरूको सामग्री प्रकारले उनीहरूलाई सामग्री दृश्यमा गणना गर्न बलको रूपमा स्थापित गरेको छ। Semalt ले यो दृष्टिकोण पनि लिएको छ र त्यसैले केवल उच्च-गुणवत्ता सामग्रीसँग सम्बन्धित छ। यसै कारण Semalt का ग्राहकहरु अधिक को लागी सँधै आउँछन्। निम्न मार्गहरू छन् जस द्वारा तपाईं आफ्नो सामग्री एक विश्वसनीय अझै सम्मिलित टुक्राहरूको रूपमा सेट अप गर्न सक्नुहुन्छ।
चाहे तपाईं आफ्नो ब्रान्डको लागि लेख्दै हुनुहुन्छ वा व्यावसायिक सामग्री प्रदायकको रूपमा, तपाईंले ब्रान्डको व्यक्तित्व प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ। तपाईंको सामग्री ब्रान्ड प्रतिबिम्बित र यसको संगठनात्मक संस्कृति प्रदर्शन गर्न दिनुहोस्। अधिकांश व्यक्तिहरू बोल्ड लेखन शैलीका लागि जान्छन् जुनमा कुनै हृदय/भावना छैन; अनुसन्धानले देखाउँदछ कि यसले ग्राहक/ग्राहक वा सम्भावितहरू समात्दैन।
Buzzfeed, उदाहरण को लागी, एक अद्वितीय लेखन शैली छ जुन कहिँ पनि चिन्न योग्य छ। हास्यास्पद GIFs, स्लs्गहरू, र संकेतहरूले यो संगठनलाई सकारात्मक रूपमा अलग गरेको छ। अवश्य पनि, सबै प्रकारका लेखन रमाईलो हुन सक्दैन (तपाईले व्यापार प्रस्तावलाई हास्यास्पद लाग्न हुँदैन), तर जेसुकै होस्, तपाईं अझै पनि सबैभन्दा तटस्थ सामग्री तपाईंको ब्राण्डको व्यक्तित्व झल्काउन सक्नुहुन्छ।
Your तपाइँको वेबसाइट र सोशल मीडिया सामग्रीको साथ कसरी राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्ने
How कसरी गर्ने र सूची सामग्री बनाउनुहोस्
सामान्यतया, वेबसाइट र सोशल मिडिया सामग्री बिभिन्न भिन्न छन्। अन्य प्रकारबाट। कसरी लक्षित दर्शकहरु सम्बन्धित र तपाइँको आंशिक प्रकाशित सामग्री संग यसको संलग्नता यसको सफलता निर्धारण गर्दछ। कसरी गर्ने र सूचीबद्ध सामग्रीले श्रोताको बीचमा सबैभन्दा बढी सment्लग्नता उत्पन्न गर्दछ। यो किनभने तिनीहरू प्राय: लिखित रूपमा सूचित गर्न को लागी लेखिएको छ तर तिनीहरूलाई बोर गर्दैन।
Questions प्रश्नहरू सोध्नुहोस्
प्रश्नहरूको प्रयोग लक्षित दर्शकहरूसँग संलग्न हुने अत्यधिक अन्तर्क्रियात्मक तरीका हो। यो रणनीति कार्य गर्नको लागि उचित प्रश्नहरू सोध्नुहोस् जुन उनीहरूको जिज्ञासा जगाउँदछ। प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् जुन उनीहरूलाई जवाफ दिन मनपराउँदछ वा मुद्दाहरूको लागि तिनीहरू उत्तर जान्न चाहन्छन्। यस तरीकाले, तिनीहरूले तपाईंको लेख र साथी पाठकहरूसँग कुराकानी गर्नेछन् जसले तपाईंको ब्लग वा सोशल मिडिया पोष्टमा टिप्पणी गर्छन्।
Inf इन्फोग्राफिक्स प्रयोग गर्नुहोस्
सबैजना चित्र, मेम्स, GIF, भिडियोहरू मन पराउँछन् किन? इन्फोग्राफिक्सले एक हजार शब्दहरू बोल्दछ, सबै एक उल्लेखनीय ग्राफिकमा। जब तपाइँ तपाइँको सामग्रीसँग अन्तर्क्रियात्मक इन्फोग्राफिक्स संलग्न गर्नुहुन्छ, तपाइँ सामग्री श्रोताहरूलाई अझ पेचींग बनाउँनुहुन्छ। यसले उनीहरूको ध्यान खिच्नेछ र केही समयको लागि समातिराख्नेछ। साथै, यसले तिनीहरूलाई तपाईं समाति आउँदछ।
Creative रचनात्मक हुनुहोस्
समग्रमा, आफ्नो सामग्रीको साथ रचनात्मक हुनुहोस्। तपाईंको लक्षित श्रोतालाई व्यस्त राख्न र तपाईंको सामग्रीमा अंकुश राख्नको लागि विविध मार्गहरू अन्वेषण गर्नुहोस्। परम्परागत लेखन शैली सधैं यसलाई काटदैन। यदि तपाईं विविधता ल्याउन आवश्यक छ र आफ्नो सामग्री जानकारीपूर्ण, प्रासंगिक, र अन्तर्क्रियात्मक बनाउन मानदण्ड बाहिर शाखा, यो गर्नुहोस्।
डी प्रूफ्रेड र लेखन पछि सम्पादन गर्नुहोस्
तपाईंको सामग्री लेखिसके पछि, तपाईंलाई प्रुफरीड र सम्पादन गर्न आवश्यक पर्दछ। तपाईंको सामग्री राम्ररी पढ्न प्रयास गर्नुहोस् र फ्लफहरू, गलत, वा अप्रासंगिक जानकारी सम्पादन गर्नुहोस्। सामग्रीको विश्लेषण गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् कि यो प्रकाशनको लागि उपयुक्त छ कि छैन। यो व्याकरणिक त्रुटिहरु र संरचनात्मक त्रुटिहरु बाट स्वतन्त्र छ कि छैन भनेर पक्का गर्न सामग्री प्रोफ्रेड गर्नुहोस्।
यदि सम्भव छ भने, तपाईंको सामग्री सम्पादन र प्रूफरीड गरे पछि, अरू कसैलाई पनि प्रकाशित गर्नु अघि काममा जान दिनुहोस्। यस तरिकाले, तपाईंको सामग्री प्रकाशित-तयार हुनेछ। कुनै पनि दिन, कहिँ पनि, प्रुफरीड कार्यहरू संरचनात्मक त्रुटिहरू, व्याकरणीय त्रुटिहरू, र गलत जानकारीको लेखहरू भन्दा राम्रो चम्किन्छ। प्रकाशित योग्य सामग्रीले ब्रान्ड जागरूकता, ब्रान्ड विश्वसनीयता, र राजस्व पनि बढाउन मद्दत गर्दछ।
ई। उपयुक्त कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गर्नुहोस्
चाहे इन्टरनेट सामग्री हो वा कर्पोरेट व्यवस्थापन सामग्री, तपाईं आफ्नो पोइन्ट घर ड्राइव गर्न उपयुक्त कुञ्जी शब्दहरूको प्रयोग गर्न आवश्यक छ। उदाहरण को लागी, मानव संसाधन प्रबन्धकहरु र भर्तीकर्ताहरु CVs र कभर पत्रहरु संग आवेदकहरु छनौट गर्न कुञ्जी शव्द पहिचान गर्ने अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्दछन् जुन खाली रिक्तता आवश्यकताहरू मिल्दछ। यसको मतलब यो छ कि यदि आवेदकहरू मध्ये एक उच्च कामको लागि योग्य छ भने, तिनीहरू CV मा सहि किवर्ड बिना छनौट हुनेछैनन्। जब प्रस्ताव, न्यूजलेटरहरू, मेमोहरू, र मनपर्दो को मस्यौदा तयार गर्दा पनि कुञ्जी शब्दहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
अझ महत्त्वपूर्ण, यद्यपि, इन्टरनेटमा आधारित सामग्रीको कुञ्जीशब्द हो। गुगल र अन्य मेटा-खोज ईन्जिनहरूले प्रासंगिक सामग्री क्रमबद्ध गर्न कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गर्दछ जब व्यक्तिहरूले शब्दहरू, वाक्यांशहरू, वा वाक्यहरूको लागि खोजी गर्दछ। गुगलमा तपाईंको वेबसाइट र्याक राख्न र पहिलो दुई खोजी अनुसन्धान पृष्ठहरूमा देखा पर्न, तपाईं एसईओ को उपयोग गर्न आवश्यक छ।
SEO खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसन हो, र यो यही हो जुन शीर्ष र्याकिंग वेबसाइटहरू गुगलमा तिनीहरूको दृश्यता सुधार गर्न प्रयोग गर्दछन्। अवश्य पनि, तपाइँलाई थाहा छ कि प्राय: व्यक्तिहरू तेस्रो गुगल खोज परिणाम पृष्ठहरूमा उनीहरूले आवश्यक पर्ने सबै जानकारी प्रयोग गर्छन्। गुगल पृष्ठभूमिमा अड्किएका वेबसाइटहरूलाई के हुन्छ? ठीक छ, तिनीहरू Google मा कम दृश्य सामग्रीको समुद्रको बीचमा हराउँछन्।
यसै कारण जब इन्टरनेट को लागी topnotch सामग्री बनाउनु हुन्छ तपाईको सामग्री संग सम्बन्धित कुञ्जीशब्दहरूको लागि नजर राख्नु पर्छ। जब व्यक्तिले तपाईंको सामग्रीसँग सम्बन्धित कुञ्जी शब्दहरूको लागि खोजी गर्दछ, यो गुगलमा पहिलो केहि पृष्ठहरूमा देखा पर्नेछ।
Semalt मा बिभिन्न उत्पादनहरू छन् जुन तपाईंको समग्र पृष्ठको साथसाथ तपाईंको एसईओ पृष्ठमा बृद्धि गर्न मद्दत गर्न सक्छ। चाँडै भन्दा पहिले, तपाइँ आफ्नो वेबसाइट भारी ट्राफिक र उच्च बिक्री कमाई देख्नुहुनेछ।
सामग्री लेखन यहाँ रहनको लागि हो किनभने सामग्री वास्तवमै राजा हो। तर सामग्रीको प्रकारले पदार्थलाई उत्पादन गर्‍यो। कम गुणस्तर र ब्लान्ड सामग्री सामग्री दौडमा उच्च मानक सामग्रीको साथ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। चाहे तपाइँसँग सामग्री डिलिभरी पोशाक छ वा तपाइँको व्यक्तिगत ब्रान्डको लागि सामग्री बनाउँदछ, तपाइँले आफ्नो खेलको शीर्षमा रहनको लागि उच्च-गुणवत्ता सामग्रीको उपयोग गर्नु पर्छ। क्वालिटी सामग्रीको लागि जानुहोस्, र गुणवत्ता सामग्रीको फाइदा तपाईंमा आउनेछन्।